Ungalanda kanjani futhi ufake iWindows 11, igxathu negxathu | Izindaba zeWindows
U-Ignacio Sala | 08/10/2021 12:28 | Kubuyekezwe ku- 08/10/2021 12:39 | Windows 11
IMicrosoft isanda kwethulwa Windows 11 enguqulweni yayo yokugcina, ngakho-ke noma imuphi umsebenzisi angakwazi ukuyifaka kukhompyutha yakhe, noma ngabe iyahambisana ngokusemthethweni noma cha, esizokhuluma ngayo ngokuhamba kwesikhathi kule ndatshana lapho esikubonisa khona futhi indlela yokulanda nokufaka iWindows 11.
Intsha enkulu esiyithola ku-Windows 11 yiyona ushintsho lomklamo, isakhiwo esisusa izinto kubha yomsebenzi siye enkabeni futhi sisuse ibhokisi lokusesha. Okunye okusha okubalulekile Windows 11 ukubuyiswa kwamawijethi, esivele sibonile ukubuka kuqala kokwakamuva Windows 10 izibuyekezo.
1 Izidingo ze-Windows 11
2 Windows 11 Ilayisense
3 Ungalanda kanjani iWindows 11
3.1 Windows 11 isethaphu wizadi
3.2 Dala iMidiya Yokufaka ye-Windows 11
3.3 Landa i-Windows 11 Disc Image (ISO)
4 Ungayifaka kanjani iWindows 11 kusuka Windows 10
5 Ikhompyutha yami ayihambelani neWindows 11
5.1 Kuyafaneleka ukufaka iWindows 11 ngaphandle kokuvuselelwa noma ukuhlala kuyo Windows 10 ngezibuyekezo
Izidingo ze-Windows 11
Ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni iWindows 11, iMicrosoft imemezele ukuthi kuphela amakhompyutha aneprosesa I-8th Gen Intel Core noma ngaphezulu, i-AMD Ryzen 2 noma ngaphezulu neQualcomm Series 7 noma ngaphezulu kuzohambisana nale nguqulo entsha.
Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokukhishwa kwenguqulo yokugcina, inkampani yamemezela lokho isuse leyo mfuneko nokuthi bonke abasebenzisi ababenayo ngokusemthethweni Windows 10 ilayisense lingathuthukela ku-Windows 11 ngaphandle kwezinkinga.
Kodwa-ke, umemezele nokuthi uma ikhompyutha ingahlangabezani nanoma yiziphi izidingo ezisezingeni eliphansi, ikhompyutha ingakwazi izinkinga zokuhambisana zamanje futhi ngeke zithole izibuyekezo.
Lapha sikukhombisa ifayili le- izidingo eziphansi ezidingekayo ukuze ukwazi ukufaka iWindows 11 eqenjini lakho.
Iprosesa: Iprosesa enezinhlamvu ezi-2 noma ngaphezulu ezingama-64-bit ku-1 GHz noma ngaphezulu.
Isitoreji: Ukufaka iWindows 11 kuyadingeka ukuthi ube ne-64 GB yokugcina noma ngaphezulu kukhompyutha.
I-Firmware: Kumele isekele imodi ye-Safe Boot
Ikhadi lemifanekiso: Iyahambisana ne-DirectX 12 noma i-WDDM 2.0 driver.
TPM: I-Module Platform Ethenjwayo 2.0
Isikrini: Ukulungiswa okuncane okudingekayo kungu-720p ngaphezu kwama-intshi angu-9 ngesiteshi esingu-8-bit ngombala ngamunye.
abanye: Udinga uxhumano lwe-inthanethi ne-akhawunti ye-Microsoft ukuze usebenzise inguqulo ye-Windows 11.
Uma singacaci kahle okuyizinto ezingxenye zethimba lethu, singasebenzisa uhlelo iMicrosoft elenza lutholakale kithi hlola ukuthi imishini yethu iyahambisana yini neWindows 11 noma cha.
Windows 11 Ilayisense
Uma ikhompyutha yakho njengamanje iphethwe yisikhulu Windows 10 ilayisense, inombolo efanayo oyisebenzisa kukhompyutha yakho ukusebenza, Kuvumelekile ukusebenzisa inguqulo entsha ye-Windows 11.
Uma ungenayo inombolo yelayisense, ungathatha izinyathelo ezilandelayo ukuthola futhi ube nayo ngesikhathi senqubo yokufaka, ngaphandle kokuthi unombono omubi wokuvuselela ngqo ku-Windows 10.
Sivula isikrini sokugcina ngomyalo we-CMD esizowubhala ebhokisini lokusesha
Ngokulandelayo sibhala I-WMIC Path SoftwareLicensingService Thola i-OA3xOriginalProductKey kulayini womyalo.
Uma le ndlela ingasebenzi, ayisebenzi ngaso sonke isikhathi, singakwazi sebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-ShowkeyPlus, uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala ngalo lesi sixhumanisi.
Futhi ngithi kuwumqondo omubi ngoba uzohudula zonke izinkinga zokusebenza ukuthi iqembu lakho liyahlupheka njengamanje. Into engcono kakhulu ongayenza ukufakwa okuhlanzekile ngokwenza isipele ngaphambilini.
Ungalanda kanjani iWindows 11
Ukuphela kwendlela esemthethweni yokwenza download Windows 11 Kungenxa yewebhusayithi yeMicrosoft. Ungalokothi ulande inguqulo ye-Windows ekhasini elingelona ele-Microsoft, ngoba ungazithola unezimanga ezingathandeki.
IMicrosoft yenza sitholakale kithi Izindlela ezi-3 ezihlukile zokulanda iWindows 11:
Windows 11 isethaphu wizadi
Si awunalo ulwazi oluningi lwekhompyutha futhi awufuni ukwenza impilo yakho ibe nzima ngokufakwa, kufanele sikhethe le nketho.
Isilekeleli sokufaka iWindows 11 sisivumela ukuthi silande le nguqulo entsha ye-Windows futhi yifake ngaphezulu kwekhophi yakho Windows 10 esikufake kukhompyutha.
Ngale ndlela, yonke idatha esinayo njengamanje kukhompyutha izogcinwa futhi zizotholakala lapho ukufakwa kweWindows 11 sekuqediwe.
Uma umbono wakho udlula yenza ekuqaleni ukufaka, le nketho akuyona into oyifunayo.
Dala iMidiya Yokufaka ye-Windows 11
Le nketho iyasivumela landa ikhophi le-Windows 11 bese wenza imidiya yokufaka ukuyifakaKungaba yinduku ye-USB noma idrayivu ye-DVD.
Lapho sesenze ukwesekwa okudingekayo ukwenza ukuvuselelwa, kufanele siqale kabusha ikhompyutha futhi singene kwi-BIOS ukuze amabhuzu ekhompyutha avela kudrayivu lapho sinekhophi ye-Windows 11 elungele ukufaka.
Uma ufuna yenza ukufaka okuhlanzekile kweWindows 11, le nketho iphelele.
Landa i-Windows 11 Disc Image (ISO)
Uma okufunayo landa i-Windows 11 ISO, ISO ongakopishela kamuva kudrayivu yangaphandle ongayifaka kukhompyutha yakho, nansi inketho oyidingayo.
Lapho sesivule uziphu isithombe se-ISO kudrayivu lapho sifuna ukufaka khona iWindows 11, kufanele qala kabusha ikhompyutha yakho bese usebenzisa leyo drayivu ukuqala okokuqala iqembu.
Ungayifaka kanjani iWindows 11 kusuka Windows 10
Enye indlela esinayo yokufaka iWindows 11 kukhompyutha entsha yile ngezibuyekezo zeWindows.
Uma ikhompyutha yakho ihambisana neWindows 11, esigabeni I-Windows Update, etholakala kuzinketho zokumisa zeWindows (Control + i) kuzovezwa umyalezo osimema ukuthi silande futhi sifake iWindows 11.
Kumele nje landela izinyathelo eziboniswa esikrinini bese ulinda iqembu liqede. Yonke idatha esiyigcine kukhompyutha izogcinwa, noma kunjalo, akukaze kube buhlungu ukwenza ibhekhaphu uma ngabe inqubo yehluleka ngesikhathi sokufakwa.
Ikhompyutha yami ayihambelani neWindows 11
Umhlaba awupheli ngoba ikhompyutha yakho ayikwazi ukuthuthukela ku-Windows 11, njengoba iMicrosoft imemezele lokho Windows 10 izoqhubeka nokuxhaswa okusemthethweni kuze kube ngu-2015, ngakho-ke kusasele iminyaka engu-4 yokushintsha okokusebenza ngaphambi kokuthi iyeke ukuthola izibuyekezo zokuphepha.
Kuyafaneleka ukufaka iWindows 11 ngaphandle kokuvuselelwa noma ukuhlala kuyo Windows 10 ngezibuyekezo
Umbuzo uyaziphendula. IWindows yisistimu yokusebenza yedeskithophu esetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele, ngakho abangane babanye basebenzela ukudala isoftware enonya yalolu hlelo lokusebenza, hhayi i-macOS noma i-Linux, isabelo sayo semakethe singaphansi kuka-10%.
Emphakathini wobuchwepheshe esihlala kuwo, izibuyekezo zokuphepha ziyadingeka njengokudla. Ukungazijabuleli izibuyekezo zokuphepha kubonisa ingozi ebaluleke kakhulu yezokuphepha kwethu neyethimba lethu okungafanele siyithathe.
Igciwane abasivikeli ekubeni sengozini ohlelweni, ukuba sengozini okusetshenziswa kubaduni ukufinyelela imishini yethu. Ukuxhaphaza ukuba sengozini kuzinhlelo zokusebenza kunenzuzo enkulu futhi kuyasebenza kunokusebenzisa izinhlelo ukusabalalisa zonke izinhlobo ze-malware.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » Izinhlelo zokusebenza » Windows 11 » Ungalanda kanjani futhi ufake iWindows 11